မြင်မိတဲ့ ပန်းကလေးများပုံ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » မြင်မိတဲ့ ပန်းကလေးများပုံ
Posted by koaung on Oct 11, 2011 in Photography, Travel | 28 comments
ကျနော်မြင်မိတဲ့ ပန်းကလေးများပုံ ဖြစ်ပါတယ် ပျော်ရွှင်ခံစားနိုင်ကြပါစေ အစဉ်လေးစားလျှက်
ကိုပေါက်ရယ်၊ ကိုစိန်သော့ရယ်၊ ကိုချိုရယ်
သုံးယောက်ပေါင်းပြီး ခရီးတစ်ခု သွားသင့်တယ်ထင်တယ်။
ကျွန်တော်က ပန်းလေးတွေထက် ရှုခင်းပုံတွေကို ပို ကြိုက်လို့ပါ။
ဒါနဲ့ ..ပန်းနာမည်တွေတော့ သိရဘူး ချိုချို ရ…
ဟုက်ကဲ့ဗျာ ပထမဦးဆုံး ဆရာခိုင်ကိုကျေးဇူးတင် စကားလေး ပြောချင်ပါတယ် ဆရာရေ ဆရာပေးတဲ့ ပွိုင်၁၀၀ ကို ဒေါ်လာ၁၀၀ ထက်တန်ဘိုး ထားရှိပါကြောင်း (အနော်က ဒတ်ပုံရူးရူး နေလို့ပါ)အရင်က ဂျပန်မှာတုံးက ဖူဂျီတောင် မှာသုံးညအိပ်ပြီး ဖလင်ရှစ်လိတ် ကုန်အောင် ရူးခဲ့ဘူးပါတယ် အဲဒီတုံးက နီကွန်FM2,FE2တို.ကိုUSE ခဲ့ရပါတယ် ကောင်းတဲ့ပုံကရှားရှား ပါးပါးပဲ အခုဒီဂျစ်တယ်ခေတ်ဆိုတော့ ဆေးဘိုမလိုတော့ ဘူးပေါ့ဗျာ ပိုပြီးရူးလို့ ကောင်းတာပေါ့ဗျာ ကျေးဇူးကဗာပါ ကြိုးစားလျက်ပါ အေးဗျာနောက်နစ်ဆို အမိမြန်မာပြည်ကို ပြန်ဖြစ်မယ်လို့ ထင်မိပါတယ် ဆရာပေါက်တို့ကိုတို့ကို လဲလေးစားလျက် ဂါရဝ ပြုပါကြောင်း(မြန်မာပြည်မှာ အနော်ဒို့လိုoverseas resident တွေကင်မရာ့တကားကားနဲ့ဆိုအဘူနိုင်းပဲ) အစဉ်လေးစားလျှက်
ပန်းနံမည် ကတော့( ကြုံတုံးရိုက်ပန်း)လို့ ခေါ်ပါကြောင်း ဆရာလေး ပေါက်ဖော်အား အကြောင်းပြန်အပ်ပါတယ် dear master kai!!!!!!!!
ei ro ei ro arigatto gosaimashita
ကိုပေါက်နဲ့ko dimond key လို့ပြင်ဖတ်ပေးပါ thanks(type forget)
ပို့ စ်ခေါင်းစဉ်ကို သေချာ မကြည့်ပဲ
new tab နဲ့ ဆွဲခေါ်ပြီး
ပုံလေးတွေ ကို မြင်ရတော့
အားပါး..ကမ္ဘာ့ အဆင့်မှီ ကင်မရာမန်း တစ်ယောက်
ရွာထဲ ထပ်ရောက်လာပြီ ပဲ လို့ 
နာမည် ဘယ်သူများပါလိမ့် လို့ 
ခေါင်းစဉ်ကို သေချာ ပြန်ဖတ်ကြည့်တော့မှ
ကောင်းလိုက်တဲ့ ပုံတွေ ပဲ ဗျို့ 
လုဎ်ပါနဲ့ဂျာ ဒီလောတ်လဲ ဟုတ်တေးဘာဝူး :grin:
blackchaw ပြောသလိုပဲ ကိုပေါက်ရယ်၊ ကိုချိုရယ်၊ ကျွန်တော်ရယ် တစ်ချိန်မှာ ဆုံပြီး photo trip လေး လုပ်ကြတာပေ့ါ။
blackchaw ကိုလည်း ခေါ်ရမယ်။ လိုရင် model လုပ်လို့ ရအောင် ။ လှေသမားလို လှေသမား၊ လှည်းမောင်းလိုရင် လှည်းမောင်း၊ ဘဲကျောင်းသား လိုရင် လည်း ရှာမနေရဘူးလေ။
ဒါတွေတင် ဘယ်ကဦးမလဲ။ ရေအိုးရွက်နေတဲ့ မြန်မာ့ မိန်းကလေး အလှပုံတို့ ၊ နွားလှည်းလေးနောက်မှာ ခြေထောက်လေးတွဲလောင်းချပြီး ထိုင်နေတဲ့ ပုံတို့ ၊ ရှင်ပြုပွဲက အချောအလှလေးတွေရဲ့ ပုံတွေဆိုရင်
ရွာထဲက မမဆူး၊ မအိတုံ၊မမနော၊မရွှေအိမ်စည်၊ မနွယ်ပင်၊ ပန်ပန်၊မမတို့ ရှိတယ်လေ။
ုံဆရာချောရေ ဝါတနာ ပါလို့တာ ဓတ်ပုံရိုက်နေတာ တကယ်ဆို ကျနော်က တလမှ၃ရက်ပဲ နားရတယ် အလုဎ်ပြီးအလုဎ်ဖြစ်နေလို့ အမြဲအာ့းလို့ကတော့ ဓတ်ပုံရိုက်ဖိုပဲ ကြိုးစားပါ့မယ်ဗျာ
ချစ်စရာလေးတွေ။ မြင်ရတယ် စိတ်ကြည်တယ်။
သုံးယောက်တော့ မပေါင်းလိုက်ပါနဲ့။ ဓာတ်ပုံအသင်းတိုက်က ပညာရှင်တွေ ထမင်းငတ်သွားမှာစိုးလို့ပါနော်။ ဒီလိုလုပ် ဓာတ်ပုံပြခန်း သုံးယောက်ပေါင်းပြီး လုပ်လေ… စားစရာ အစုံအလင်ဘူဖေး ကျွေးပြီး ဓာတ်ပုံတွေကို အနုပညာလာရောက်ခံစားချင်လို့ပါ။
ဘူဖေး ထဲမှာ,indian ဘူဖေးဆိုအရမ်းကောင်းမှာ၊,(chinese,westle) hotle ဘူဖေးတွေရှားလို့ကောင်းဝူးindian ၊ဘူဖေးဆိုပိုကြိက်တယ် မြန်မာပြည်မှာတုံးကဆို အားတိုင်း မဂိုလမ်းမှာအားပေးတယ်ပြောရင်းဗိုက်တောင်စာလာပြီ(ချာပါတီ၊နန်ပြား)ဆိုပိုပြီးကောင်းလယ် ကြက်ရှာစွန်းက ဒံပေါက်ကတော့ ရှားလို့အကောင်းဆုံး
But, Ko Cho,
Indian Buffets arealot more expensive than Chinese & Western Buffet.
( Both in Myanmar & in Australia )
i know fri,Thai dish also top grade ,i can cook very well (i have been BKK and stay half year ) i love it
မြန်မာပြည်က.. ပိုးမွှားအကောင်ဘလောင်တွေကို.. အခုလို မိုက်ခရို၊မက်ခရိုနည်းနည်း ရိုက်ဖို့ပါ..။
ဆောင်းတွင်းထွက်လာတဲ့.. ပိုးမွှားတသိန်း.. အခုလိုရိုက်.. အမည်တွေပြန်ရှာ.. ဓါတ်ပုံစာအုပ်ထုတ်ရောင်းရင်.. ကမ္ဘာက၀ယ်လောက်တယ်..။
သူကြီး kai သို့ 
သာယာလှပတဲ့ဒီနေ့သီတင်းကျွတ်လပြည့် အခါသမယမှာ သူကြီး နှင့် တကွ
ဂေဇက်မှ ရွာသူ/ ရွာသားတွေလည်း ကျန်းမာ၇ွှင်လန်းပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်နော် ……..
ဂေဖက်ကို အထူးနှစ်ခြိုက် ပြီး အားပေးမိတာ တနှစ်လောက် ရှိပါပြီ။နေ့ စဉ်ဝင်ဖတ်မိပါတယ်။
အခြား site များနဲ့ မတူ ဂေဇက်ရဲ့ အထူးအားသာချက် တရပ်က up-to-date news များကို
အမြန်ဆုံး သိရခြင်း (ဥပမာ-ဧရာဝတီ သတင်း) ၊နိူင်ငံ ပေါင်းစုံ လူမျုိုးပေါင်းစုံ ၇ဲ့ သူတို့ မျှဝေလိုတာလေးတွေ ကို တနေရာတည်းမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပြီး ခေတ်နဲ့ မှီတဲ့ ဗဟုသုတပေါင်းစုံကို
တနေရာတည်းမှာ ဖတ်ရှုရတဲ့ အတွက်ပါ။ ဘာသာေ၇း ၊ သုတ ၇သ စာပေ ပိုင်းကိုတော့ ပို နှစ်သက်မိပါတယ်။
” Multi ideas on different articles can attract the readers’s interest. ”ဆိုတဲ့ အတိုင်းပါဘဲ။
အထူးသဖြင့်Photography ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ nature lover တယောက်ဖြစ်တာမို့ ဒီဂေဇက်ကတင်တဲ့ nature photos တွေ ။ခရီးသွား ဆောင်းပါးနဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ ကို အထူးနှစ်သက်မိပါတယ်။ဒီ အကြောင်းတွေ ကြောင့် ဂေစက် ကို
နေ့ စဉ်နေ့ တိုင်း အမြဲ-၀င်ေ၇ာက်ဖတ်ရှုအားပေးနေတဲ့ဂေဇက်ရွာသူ တယောက်ပါ။
ဂေဇက်ရွာကြီး သာယာလှပဖို. အရေး အစဉ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ သူကြီးအနေနဲ့ 
ဂေဇက်ကို ချစ်တဲ့ ၊ ဂေ ဇက် ကိုစေတနာထား ပြီး
အချိန်ကုန်၊ အပင်ပန်းခံ မျှဝေနေတဲ့
့ဓါတ်ပုံကို..ဓါတ်ကျနေတဲ့.. ဓါတ်ဆရာ အပေါင်းတို့ အား
၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာ အားပေးမှုအပြည့် ဖြင့် 
နွေးထွေး စွာ ကြိုဆို သင့် ပါကြောင်း။
တဂျီးရေ ဂတိတော့မပေးတေးဘူး ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာမှတ်ထားပါတယ် တနေ့လိုအပ်ရင်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကကူညီဘို့ အသင့်ပါ အစဉ်လေးစားလျှက်
ကဲ ကိုပေါက်နဲ့ ကိုDiamond key၊တို့ကြားတယ်နော် ဆရာခိုင်ပြောတာ ဟီးဟီး ခုတော့အားတေးဝူး master အနော်မိန်းမချူလိတ်မယ်
ကို ချိုေ၇
ဆန်းသစ်တဲ့ အမြင်နဲ့ ၇ိုက်ထားတဲ့ ပန်းကလေးတွေကို မြင်ရတာ
စိတ်ကို ရွှင်မြူး အထူး ကြည်နူးစေလို့ ကျေးဇူးပါဗျာ။သိပ်ကောင်းတဲ့ ပုံတွေပါဘဲ။
”ဝါသနာ ပါလို့သာ ဓာတ်ပုံရိုက်နေတာ
ကျနော်က တလမှ၃ရက်ပဲ နားရတယ်
်အလုဎ်ပြီးအလုဎ်ဖြစ်နေလို့ အမြဲအာ့းလို့ကတော့ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖိုပဲ ကြိုးစားပါ့မယ်ဗျာ။”
ယုံပါတယ်ဗျာ(လက်ရာကြည့် တာနဲ့ ) တကယ် ဓာတ်ပုံဝါသနာ၇ှင်တယောက် ဆိုတာ။
အခြား နိူင်ငံတွေ၇ဲ့ ၇ှုခင်း ပုံ လက်ရာကောင်းကောင်းလေးတွေ ၇ှိ၇င်လဲ မျှဝေပေးပါဦးနော်။
ကြိုးစားလျှက် and thanks for your comment
ကိုစိန်သော့ကြီး ပြောသလို မကောင်းဘူးလား။
ကျွန်တော်က မာန မကြီးတတ်ပါဘူးဗျ။
ဟားဟား လုဎ်ပါနဲ့ဗျာ ကျနော်ကမပြောရက်ပါဘူးဗျာ ကျနော်လဲ အခြေခံဘဝကစခဲ့တဲ့ လူပါဗျာ အခုဘယ်မှာပဲရောက်ရောက် ဘဝမမေတတ်ပါဘူးဗျာ့ ဒါကြောင်၊လဲ လူတိုင်းကိုလေးစားလျှက်ပါ ၊ရိုးရိုးတားတား ကြိုးကြိုးစားစား နဲ့မြန်မာပြည်ကောင်းစားရေးကိုဦးတည်ရင်း ညီညွတ်စွာ ရောက်တဲ့နေရာက တတ်နိုင်တာလေးနဲ့ကူညီရင်း လက်တွဲကြစို့လားသူလဲ ကျနော်လိုအနောက်သန်လို့ဖြစ်မှာပါ , ဘားဂလစ်က ,use ရတာဆိုတော့ စာလုံးပေါင်းမှားရင်forgive me please
ဟီးဟီး တိဝူး မိသားစုနဲ့ အပြင်ထွက်တုံး(ချန်ကေရှိတ်အာဇာနီဗိတ်မန်)လမ်းဘေးမှာ ကြုံတုန်းရိုက်ထားတာ